Isingxobo sokutya sesilwanyana esithengisa ivenkile evenkileni uMenzi kunye noMboneleli |Yingzhicai
Igama Spoutediingxowa ukutya cat / ukutya kwesilwanyana
Ubuninzi bomthamo 30g-2kg
Usetyenziso Ukutya kwezinja, ukutya kwekati, nakuphi na ukutya kwesilwanyana
Uhlobo lwesingxobo Ibhegi yokutya yesilwanyana sasekhaya espouted / iziphu yengxowa yokutya yesilwanyana sasekhaya
Izatifikethi ISO 9001;I-ISO 14001, I-BRC-PAKING.
Isakhiwo kunye nemathiriyeli I-PET/PE;I-PET/NY/PE;I-PET/AL/NY/PE;I-PET/MPET/PE
Izincedisi Isingxobo esiphuphumayo
Ukushicilelwa Ubuninzi be-10imibala.
Inkqubo yoshicilelo Ukuprintwa kweGravure
Umthamo wemveliso 50,000 iipcs ngosuku
Izibuko lokuthumela ngenqanawa Qingdao, China
I-1.spouted bags yinkqubo yokupakisha evuthiweyo kwipakethe yokutya kwekati okanye inja, enomtsalane kokubili ngexabiso kunye nomgangatho.Uninzi lokupakishwa kokutya kwekati kwimarike kusebenzisa iingxowa ezine-quad seal, kwaye,Ushicilelo oluchanekileyo lunokubonelela ngembonakalo entle yeemveliso zakho.
2.I-pouch retort ingaphekwa kwi-130 ° C imizuzu engama-30, ehlangabezana ngokupheleleyo neemeko ze-UHT zokuvala inzala, iqinisekisa ukhuseleko kunye nokucoceka kokutya kwesilwanyana se-gravy ngaphakathi kwesikhwama.
Ipropati yesithintelo esiphezulu se-retort pouch inokuqinisekisa imeko ecocekileyo yokugcina i-gravy pet pet emva kokuvala inzala, umxholo ongaphakathi kwesingxobo unokukhumbula umgangatho omhle kwaye awuchatshazelwa lula yimeko yangaphandle.
Umthamo wesingxobo esisicaba esinecala elisi-8 sincinci kakhulu, sifanelekile ukwenza ukutya kwesilwanyana sasekhaya segravy encinci ipakethe.very fasion.
Iipowutshi zethu zokutya kwezilwanyana zasekhaya, zisebenzisa izinto zokupakisha ezizinzileyo kunye ne-eco-friendly, ibe yimveliso ephambili kuhlobo oluninzi kutsha nje.
Iimpawu zengxowa ye-retort zifaneleke kakhulu ukwenza iipowutshi ezimanzi zokutya kwesilwanyana, kuba rhoqo olu hlobo lokutya okumanzi kwekati lufuna ukuvalwa inzala ngokupheka.
Ngeempawu ezintle zokuma iipowutshi zethu zokubuyisela zingaboniswa kakuhle kwishelufu.
Ngokuqhelekileyo umthamo we-stand up retort pouches awukho mkhulu, kodwa kulula ukuboniswa kwiindawo ezingenamahuku okanye naluphi na olunye uncedo.
Ngaphambili: Isosi ephothiweyo
Okulandelayo: Isingxobo sesiselo seziqhamo